The Irrawaddy's Blog: ဗြိတိသျှ သံအမတ်ကြီးရဲ့ ဒလဘက်က ပြည်သူ့ဘ၀ လေ့လာရေးခရီး
မြန်မာနိုင်ငံမှာ တာဝန်ထမ်းဆောင်နေတဲ့ ဗြိတိသျှ သံအမတ်ကြီး အန်ဒရူးပတ်ထရစ်ဟာ ဒီကနေ့ နံနက်ပိုင်း က ရန်ကုန် တဘက်ကမ်း ဒလ မြို့နယ်ဘက်ကို သွားခဲ့ပါတယ်။
British Ambassador Andrew Patrick visited Dala to getasense of how people commute to work in Yangon. Some faceajourney of two hours each morning.
ဒလမြို့နယ်ရှိ ပြည်သူလူထု နေ့စဉ် ရန်ကုန်မြို့ဘက်ခြမ်းကို အလုပ်လုပ် သွားရ တဲ့ အခြေအနေကို သိရှိဖို့ အတွက် သွားရောက်လေ့လာခဲ့တာပါလို့ Foreign Office news Burma face book စာမျက်နှာ မှာ ဖော် ထားတာကို ဖော်ပြပေးလိုက်ပါတယ်
မြန်မာနိုင်ငံမှာ တာဝန်ထမ်းဆောင်နေတဲ့ ဗြိတိသျှ သံအမတ်တဦးက မြန်မာပြည်သူလူထုရဲ့ အခြေအနေကို အခုလို သွားရောက်လေ့လာမှုဟာမြန်မာနိုင်ငံသားတွေရဲ့ပကတိအခြေအနေမှန်ကို ပိုမိုသိရှိလာစေမှာဖြစ် ပြီး လိုအပ်ချက်တွေကို ဘယ်လို ဖြည့်ဆည်းပေးနိုင်မယ်ဆိုတာ သံအမတ်အနေနဲ့ သိမြင်ခွင့် ရမှာလည်း ဖြစ် ပါတယ်။
မြန်မာအစိုးရ တာဝန်ရှိသူတွေနဲ့ လွှတ်တော်ကိုယ်စားလှယ်တွေလည်း ဗြိတိသျှ သံအမတ်ကြီးလို အောက်
ခြေ ပြည်သူလူထုတွေရဲ့ ဘ၀တွေကို လေ့လာမှုတွေ ရှိခဲ့မယ်ဆိုရင်လည်း ဟိတ်ဟန်မပါ၊ ကြိုတင်ပြင်ဆင် ခိုင်းတာတွေ မလုပ်ဘဲ အခုလို သွားရောက်လေ့လာသင့်တယ်ဆိုတဲ့ အသိတခု ရစေနိုင်မယ် ထင်ပါတယ်။